Naniry hanana fiainana mandrakizay aho
"(Hoy Jesosy:) Izaho no Mpiandry Tsara; ary fantatro ny Ahy, sady fantany Aho, dia tahaka ny ahafantaran’ny Ray Ahy sy ny ahafantarako ny Ray; ary Izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry."Jaona 10:14-15
«Teraka tao anaty fianakaviana sambatra, katolika nafana fo, aho. Zanaka tena hendry aho, ary nampianarin’ny ray aman-dreniko ahy tsara ny soatoavina. Koa dia nitombo tao anaty tontolo feno hantahanta sy fitiavana aho. Nankany am-piangonana izahay isan’alahady. Mbola nankany foana aho, hatrany amin’ny oniversite. Satria moa aho anisan’ny mpitendry zavamaneno, dia tsy maintsy nankany isan’alahady. Nahafinaritra ahy tokoa ny fideran’ny olona anay, isaky ny mifarana ny fotoam-pivavahana.
Na izany aza anefa, dia tsy nahafantatra ny Tompo Jesosy aho. Nihevitra aho, na tsy dia nandalina loatra ny momba izany aza, hoe ao anaty lalana tena izy, satria olona “tsara” sy katolika, ary “ambonin’izany”, nazoto nivavaka.
Nihaona taman’olona samihafa aho, ary nanosika ahy izany hanontany tena momba ny fiainana mandrakizay sy ny lalana mitondra ho any. Naniry hanana izany fiainana mandrakizay izany aho, aorianan’ny fahafatesako. Koa nanomboka nanao fandinihana tsotsotra ny Baiboly, niaraka tamina namana kristiana iray, izahay mivady. Tamin’izany no nahitako fa ny fiainana mandrakizay dia atolotra maimaimpoana ho an’izay mandray an’i Jesosy ho Mpamonjiny. Hoy Izy: “Izay mino [Ahy] no manana fiainana mandrakizay” (Jaona 6:47). Takatro ihany koa ny maha zava-dehibe ny fanarahana an’i Jesosy, amin’ny androm-piainako sisa.
Hafa ny fiainako ankehitriny. Miaraka amiko isanandro isanandro ny Tompo. Omeny ahy ny fiadanana mandritra ireo fotoan-tsarotra lalovako, ny fifaliana isanandro ary ny antoka hoe manana fiainana mandrakizay.»